Meles Zenawi Kaddib mala mid Noqon doontaa sidii Maxamed Siyaad Kaddib oo Kale (MAQAAL) Qore/ C/waaxid Khaliif | News From Somalia
Ilaah baa mahad leh. Naxariis iyo nabadgelyo ha ahaato Nabi Muxamed korkiisa!:
Mar haddii halbeeggii Islaamka ee Muslimiintu wax ku cabbiri jireen meesha ka baxay maaddaama Muslimiinta Itoobiya noqdeen kuwa la addoonsado baan arrinta dhan kale ka eegayaa! Xabashi badan khaasatan kuwa Kiristaanka ah ee awoodda gacanta ku hayey muddo badan ama hadda ku haya baa ah dad qodoto/beeraleey ah. Waa jiraan dad reer guuraa ah sida Muslimiin hoos jooga Xabashida oo Soomaali ku jiro. Wey jiraan sidoo kale kuwo gaalo ah oo reer guuraa ah! Qodoto iyo reer Miyi waa kala dhaqan.
Dad badan waxaa laga yaabaa inay dhahaan: reer Galbeed baan ogoleyn in shacabka Itoobiya dhex maro dagaalsokeeye ama awood-isku-qabsi! Ha jirto in reer Galbeedku saas rabaan laakiin mar kasta sida reer Galbeedku rabo wax uma dhacaan. Qofkii arrintaas fahmi waayoow fiiri waxa ka socda Masar! Yaan loo qaadan inaan leeyahay Mursi baa soo wada Shareeco Islaam ee waxaan ka wadaa in reer Galbeed geed dheer iyo mid gaaban u fuuleen inaan Ikhwaanku gacanta ku dhigin talada Masar. Saasooy tahay, hadda, Ikhwaan baa ka ah madaxweyne Masar!
Is-weydiin ma leh inaan nahay haddaan Soomaali nahay dad dugaag ah oon intooda badan diin, dowladnimo, iyo walaaltinimo xeerin! Dhaqankaas xun kuma saleysna Islaam ee wuxuu ku saleysan yahay reer guuraanimo.
Iyadoo laga yaabo in dad badan arrintan igu diidaan; haddana waddanimada laga sheego Xabashida qaarkeed, waa aqbalaad ay aqbaleen addoonnimo iyo dullinimo! Maaddaama Xabashi badan khaasatan kuwa Kiristaanka ah ee waddanka gacanta ku haya u badan yihiin qodoto ayey ahaayeen dad aan guurguurin oo qarniyaal badan ku garaadsaday boqortooyo fac weyn iyo kala-dambeyn! Maba aaminsana in qofku noolaan karo hadduu ka tago goofkiisa iyo beertiisa! Boqortooyooyinku dadka ha gumeysteen laakiin dadka Xabashidu waxay arkeen in dowladdu ka adkaaneyso dad reer guura ah oo tiro badan oo xitaa qab leh!
Dhaqamo-xun oo miyigu leedahay sida kala-dambeyn la’aanta marka indhaha laga laabto ayaa haddana sifooyinka wanaagsan ee miyiga sida geesinimada, addoonsi-diidka, codkarrnimada, iyo marti-soorkuba mar mar keenaan dhibaato. Qofka Soomaaliga ah inta ka soo tago Raas Casayr buu u safri jiray Raas Kaambooni isagoon sahay sidan! Wuxuu isku halleynayey dadka Soomaaliyeed ee deggen meeluhuu sii marayo! Taasi waxay fududeysay in qofka Soomaaliga ah fududeysto safarka ilaa la arkay iyagoo iska sii aaday Bariga Afrika, Yemen, iyo Sacuudiga! Qoysas badan oo Bari ku dhashay baa Kismaayo deggen. Kuwa Waqooyi ku dhashay baa Shabeelaha Hoose ama Galgaduud deggen. Ogoow, waa intaan magaalooyin dhismin! Maxaa keenay in qoysas saas u badan oon abaar ama colaadi meesha geyn iyagoo intaas le’eg saas u doolaan? Waxaan ku soo baxnnay in meeshaan ku dhalannay aysan ahmiyad gooni ah noo lahayn marka la fiirsho meeshaan degnno. Qof Xamar ama Berbera ama Boosaaso ku dhashay baa iska degaya Mombasa dabadeedna laga yaabo inuusanba kala jecleyn Soomaaliya iyo Kenya!
Sifooyinkaas dartood iyo dhibaatada reer Galbeedka iyo gaalomadowdu nagu heysato darteed baa ka dhigay inaan qofka Soomaaliga ahi qiimeynin waddankiisa oo uusan jecleyn. Waa midda keentay in Mahiga na xukumo, waddamo daanyeerro cunana heystaan waddankeenna sida Ugaandha iyo Burundi!
Xabashidu tii hore maaha! Qaar badan baa cagta saaray waddadii Soomaalida. Adduunku sidii hore maaha! Xabashi badan baa qaxooti ku ah Yurub, Waqooyiga Ameerika, iyo Ustaraaliya! Xabashida badankoodu waa rabi lahaayeen inay sida Soomaalida soo galaan waddamadaas aan sheegnnay markay gumeysi iyo ciqaab kala kulmeen maamuladii kala-dambeeyey ee Itoobiya!
Xabashi badan baa sida Soomaalida ku dhammaatay doomaha tahriibka! Marka waddaniyad badan oo loo tiirin jiray Xabashida waxay ku xirneyd iyagoo ahaa dad iska dhega xiran oo u qabay hadday ka tagaan beertay qodanayaan inaysan noolaan karin. Sidaas darteed wey ku samreen dulligaas.
Haddii qaxooti yimaado waxaa i maaneysa in qofku noqdo reer-guuraa! Haddii reer-guuraanimo meesha soo gasho waxaa imaaneysa dhiidhin iyo isku-taag la isku taago boqorrada iyo madaxweynayaasha! Ma filayo in dad badani igu diidayo in Xabashi badani mucaarad ku ahaayeen Zenawi! Xabashi badan in Zenawi dhinto bay ka jeclaayeen in Shariif sheekh Axmed ama M. Xusni Mubaarak dhinto maxaa yeelay waxa dhibka ku hayey wuxuu ahaa Zenawi!.
Shaki ma leh in Xabashida gaalada ah ay mar mar ka mideysan yihiin Kiristaanimada dabadeedna ay dhici karto in iyagoo is haya u midoobaan Muslimiinta sida Soomaalida. Waa haddii la heli lahaa boqorro iyo madaxweynayaal caqli leh oo iyagoo wax gumeysanaya haddana xeerinaya waxyaalo badan.
Shucuubta Yurub waa soo mareen boqorro dhib badan. Markay ka faa’iideysan Muslimiintii waddamo Yurub ah qabsatay dabadeedna shucuubtii Yurub indhaha u furmeen oo meelo ka fog Yurub sida Ameerika u safreen bay diideen sida wax u socdaan dabadeedna waxaa loo allifay qaab kale oo ka duwan kii hore. Waa qaabka ay hadda u nool yihiin! Xorriyad baa jirta laakiin si kale baa dadku u harjadayaa. Qofka Galbeedka u dhashay isagoo xor ah buu ku jiraa addoonimo aan la arag marka la eego nolasha laakiin waa addoonnimo ay ku faraxsan yahiin. Dadka Galbeedka u dhashay ha dhibbanaadeen laakiin maaddaama codkooda loo baahan yahay oo iyagu yihiin kuwa wax kala doorta baa loo sameeyey nolol wanaagsan ooy iskaga noolaadaan! Dadka waddamadaas heystana wax badan bay waddankooda gasheen, dadkoodana u sahleen nolosha.
Maaddaama Xabashi iyo gaalomadow kalaba ilbaxeen ooy dhul mareen ayaa la rabay TPLF inay dadka xorriyad siiyaan oo si dadban u gumeystaan laakiin Zenawi iyo TPLF taas waa diideen waxaan ka ahayn arrimaha aan hoos ku sheegi doonno! Qoysas badan oo Xabashi ah baa qaar ka mid ah ehelkoodu ku nool yihiin Galbeedka! Waxay u sheegayaan xorriyadda halkaas taal! Taasi waxay keeneysaa in dadku iska soo taagaan qabyaaladda iyo kaligi-talisnimada tooska ah!
Labaatankii sano ee u dambeeyey, Zenawi iyo xisbigiisa TPLF oo ku maxaabsada xisbiga EPRDF ayaa dadka Xabashida geshay gumeysi aan la arag! Zenawi wuxuu Xabashida tusay qabyaalad sooc ah! Wuxuu meelaha Tigreegu degaan ka dhigay barwaaqo. Wuxuu ka dhisay kulliyadaha ciimada ee ugu sarreeya. Wuxuu geeyey ciidankii rigliga ahaa ee waddanka. Wuxuu ka dhisay warshado. Wuxuu ka dhisay jidad, iskuullo, iyo isbitaallo! Xitaa wuxuu xarumo uga furay hay’adaha wax caawiya! Hubkii iyo dabbaabaadkii intoodii badneyd meeshuu iskugu geystay. Xabashi badan waxay hadda ugu neceb yihiin waxay dhegehoodu maqlaan waa Maqale ee ma aha Muqdisho!
Sifooyinka qodotada oo ku xidideystay Xabashi badan, reer Galbeedka oo isku dayaya inay isku hayaan Itoobiya, fara-marnaanta mucaaradka Zenawi baan filayaa inaysan arrinta Itoobiya maalmo kooban u qarxeyn sidii Axaddii Diseember 1990 ka dhacday Xamar! Dagaal sokeeye ee Soomaaliya laftiisu dhowr iyo toban sano waqtigaas ka hor buu bilowday ee hal mar iskama qarxin! Saasooy tahay waxaan rajeynayaa in kala-furfurashada Itoobiya imaan doonto waqti aad uga horreeya midka ay dad badani suureysanayaan!
Sheekadu ma aha mucaaradka Zenawi keliya! Ninka hadda sii haya jagada ra’iisul wasaaraha, hailemariam desalegn, waa nin ka soo jeeda qabiil yar ahna nin miskiin ah! Si kastaba ha ahaatee haddii laga dhigo ra’iisul wasaare; yaa usha u qabanaya? Ma xaaskii Zenawi ka tagay? Ma walaalkeed? Ma Taliyaha ciidamada? Ma Wasiirka caafimaadka! Qof kasta waa ogyahay inuusan jirin wax uga daran xukuumad isqabqabsi dhexdeeda ah!
Mar haddii Zenawi goboleysi iyo qabiil tusay dadkii reer Itooibiya, la-yaab ma leh in Tigreega laftiisu isku sii qabqabsadaan xukunka! Qofkii u qaba in madax Kiristaan ah ama qabiillo Kiristaan ah aysan is dagaalin oo ilbax yihiin ha fiirsheen wixii ka dhacay Ruwaanda iyo Burundi ama ka socda Koongo! Ama siday maalmo gudahood isu galeen Kikuuyo iyo Jalwada. Haddii Kibaki iyo Odinga is galeen; maxaa diidaya in madax Itoobiya u dhalatay is gasho?
Waxaa intaas sii dheer in Zenawi faraha la galay Islaamkii oo uu keenay nin Faransiis iyo gaalo wadato oo la dhaho C/Laahi Al-Xabashi. Waa nin loo keenay inuu Muslimiintii la addoonsanayey sii lumiyo. Muslimiin badan baa arrintaas arkay waana iyaga kacdoonka wada!
Waxaa kaloo shucuubta adduunku aragtay sida shacabkii Carabtu iskaga tuureen heeryadii xukaamtooda! Arrimahaas iyo kuwa kale dartood baan aamisannahay in kala-daadashada Itoobiya aysan fogeyn! Nasiib-darrada jirta waxay tahay waa iyadoo meeshii fursaddaas laga faa’iideysan lahaa in Daaroodna Kismaayo kusoo wato gaalomadow Kenya u dhalatay; Hawiyana Museveni ku leeyihiin haddaad madax naga dhigtid Shabaabkaan la dageeleynaa oo adaa sii joogaya Soomaaliya! Waxaan rajeynayaa waa iyadoon gaalomadow Kenya u dhalatay Kismaayo gaarin in gaalka Kibaki Ilaah na dhaafiyo sidii Zenawi oo kale. Marka sida Maraykan xukunka uga celin waayey Mursi bay u dhowdahay inaysan wax weyn ka qaban karin arrinta Itoobiya.
This entry was posted in Banaadir Post, ITOOBIYA, Males Zenawi, Somali Media, Somalia, Xasuuqa Xabashida!! and tagged Itoobiya, Males Zenawi, News From Somalia, Xasuuqa Xabashida!!. Bookmark the permalink.